China Silicone Rubber Cushion Ho an'ireo mpanamboatra sy mpamatsy Laminator mpanao karatra | Cayce Mey
Silety cushion vita amin'ny silipo ho an'ny laminator fanaovana kard dia natao sy novokarin'ny orinasanay izay natokana hanohanana ny indostrian'ny fanaovana karatra arakaraka ny fangatahan'ny tsena, mety amin'ny kara-kara-banky, carte de crédit ary famokarana karatra hendry.
Ny landy vita amin'ny silipo vita amin'ny orinasanay dia mampiasa karazana firafitra roa, dia ny KXM4213, ny silipo vita amin'ny silika roa miaraka amina lamina, ny lamba afovoany vita amin'ny fiberglass. KXM4233, lafiny roa nahatsapa, fingotra silipo sosona afovoany.
KXM4213 (roa silipo silipo misy lamina, afovoany fiberglass lamba)
Akora hafarana nafarana avy any Alemana, mahazaka hafanana avo, elastika tsara
Hafanana mitarika haingam-pandeha, hafanana nozaraina mitovy
Famerenam-bidy avo lenta tsara.
Mahazaka solvent, mahazaka antitra, mahatohitra harafesina.
KXM4233 (samy nahatsapa ny roa tonta, silika silika afovoany)
Ny akora akora dia mety mamerina ny hafanana, mahazaka tosika avo.
Ny fifohana rano tsara, afaka manala ny bubble sy ny watermark an'ny karatra ambonimbony.
Buffering tsara, halava ny androm-piainany ny fanafanana board sy ny laminating board.
zavatra KXM4213 KXM4233
Fitaovana ambonin'ny Silika vita amin'ny silipo misy lamina Hafanana mahatohitra hafanana
Fitaovana afovoany Lamba fiberglass Silika silipo mainty
Amoron-dranomasina henjana A 55 ± 5 50 ± 5
Herin-tady (N / mm) 80 60
Adhesion (N / mm) 4.5 4.5
Fanoherana ny maripana ℃ 230 200
Loko fotsy fotsy
Ireto misy ny mampiavaka azy:
(Làlam-pandrefesana vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy misy lafiny roa)
• Ny vokatra dia mandray akora akora nafarana avy any Alemana, fanoherana ny hafanana avo ary malefaka tsara.
• Ny fitarihana hafanana haingana sy ny fizarana hafanana mitovy dia afaka mampitombo be ny vokatra ateraky ny fizotran'ny lamination.
• Manana fanoherana tsara amin'ny tsindry izy, tsy misy fiovana, azo itokisana ary maharitra.
• Manampy amin'ny famongorana ireo lavaka sy voamaina tsara eny ambonin'ny tany ary manatsara ny kalitaon'ny vokatra.
• Fanoherana solvent, fanoherana fahanterana, fanoherana ny harafesina, tsy misy poizina ary tsy misy fofona, mifanaraka amin'ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana.
• Ny akora vita amin'ny vokatra dia mahazaka hafanana sy fanerena avo lenta, mahafeno ny fepetra takian'ny teknika amin'ny fanaovana karatra sy ny lamination, ary ampiasaina betsaka ho fampiasa amin'ny fanaovana karatra manokana.
• Fanamafisana hafanana haingana sy mitovy, manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary mitsitsy angovo.
• Manana fahombiazan'ny fitrohana rano tsara izy io, afaka mamono amin'ny fomba mahomby ny bubble sy ny mari-drano eo ambonin'ny karatra, ary manatsara ny tahan'ny fahaizan'ny vokatra.
• Manana fahombiazana tsara amin'ny alikaola izy, misoroka ny marika maratra ateraky ny fifandraisana mafy eo anelanelan'ny takelaka fanafanana sy ny laminaty, ary manalava ny androm-piainan'ny takelaka fanafanana sy ny laminate.
• Mora ampiasaina, mitahiry ora fanoloana.
Teo aloha: Silicone Rubber Cushion Fa Hot Press
Manaraka: Taratasy vita amin'ny lamba vita amin'ny silipo ho an'ny Solar Laminator
Pcb Rubber Cushion Membrane Ho an'ny milina fanaovan-gazety
Taratasy vita amin'ny silipo vita amin'ny silika ho an'ny fanontana lamba